Cross-Domain Canonicals B NOTGH for maka Internationalization | Martech Zone
Cross-Domain Canonicals abụghị B for maka Internationalization
Wednesday, December 12, 2012 Na Tọzdee, Septemba 24, 2013 Nikhil Raj
Nchọgharị Nchọgharị maka weebụsaịtị mba ụwa abụwo mgbe niile mgbagwoju anya isiokwu. Ga-ahụ ọtụtụ ndụmọdụ na ntanetị mana ekwesighi imejuputa ozi ọ bụla ị nụrụ. Wepụta oge iji chọpụta ihe ndị ị hụrụ n’ onlinentanet. Ọ bụ ezie na ọkachamara nwere ike ide ya, ọ pụtaghị na ha ziri ezi.
Ileba anya, Hubspot weputara akwukwo ohuru 50 SEO & Ndụmọdụ Weebụ maka International Marketer. Anyị bụ ndị Fans nke Hubspot na ụlọ ọrụ anyị bụ ikike Splọ ọrụ Hubspot. Agbanyeghị, akwụkwọ ebook a na-adịbeghị anya nyere ndụmọdụ na-adịghị mma nke nwere ike ịnweta ndị SEO nsogbu mgbe ha na-emeziwanye saịtị ha. Anyị gbara ha ajụjụ na ya site na mmekọrịta mmadụ na ibe ha wee nye nkọwa banyere Google - mana enwetaghị ọtụtụ mmeghachi omume na ọ ga-agbazi. N'ihi ya, anyị na-ede edemede a iji dọọ ndị na-agụ akwụkwọ anyị aka.
International SEO Ndụmọdụ
Mgbe ị na-eji ihe karịrị otu ngalaba-elu (TLD), Hubspot kwadoro iji obe ngalaba canonical tag iji tụọ saịtị nke ọ bụla na mba gị gaa na saịtị gị. Nke a abụghị ezigbo ego ma ga-emerụ mbọ SEO gị. Na rel = ”canonical” mkpado eji na- kpochapu mbipụta ọdịnaya abụọ site na weebụsaịtị. A na-eji ya agwa Google ihe kachasị mma nke otu peeji nke ibe nwere ọdịnaya yiri nke a nke ịchọrọ ka Google depụta ma gosipụta na SERP ya. Ndị ọkachamara SEO na-enye ndụmọdụ na mgbe ọ bụla ndozi ga-ekwe omume maka ọdịnaya abụọ anaghị eme mmezi mkpado canonical.
Nke a bụ ego ahụ Hubspot nyere:
Cross-Domain Canonicals abụghị Ngwọta Ya
Ka anyị were ya na m nwere 3 gTLD maka weebụsaịtị m zuru ụwa ọnụ - mysite.com, mysite.co.uk, na nwe.it. mysite.com na mysite.co.uk nwere ọdịnaya yiri ya; mysite.de nwere otu ọdịnaya ma n'asụsụ German.
Ka anyi mejuputa ihe ebook kwuru. Ebe nrụọrụ m bụ mysite.com. N'ihi ya, m ga-etinye njikọ canonical dị ka mysite.com na .co.uk na .de ngalaba. Mgbe Googlebot rutere na ngalaba .co.uk m, ọ na - agbaso njikọ njikọ canonical na indexes my .com domain.
Ọ bụrụ na m mee nke a, Google agaghi eme index m .co.uk na .de ngalaba na peeji ndị a ga- egosighi na ọchụchọ Google mpaghara! M ga-efunahụ ikike niile m wuru maka ngalaba mpaghara m na saịtị .com!
Mmejuputa hreflang bụ azịza kwesịrị ekwesị
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchekwa weebụsaịtị na mpaghara yana ọ bụrụ na ị nwere ike iwulite ikike maka koodu TLD ọ bụla, B NOTGH tag iji mkpado canonical. Google n'ezie zara ajụjụ a na enyemaka ha Webmaster Central forum (Ekele dịrị Anju Mohan). Google kwuru “anaghị eji canonical mkpado” ma ọ bụrụ na ị chọrọ gị multiregional weebụsaịtị na-indexed Google. Google kwuru jiri rel = ”ozo” hreflang = ”x” kpado kama.
The rel = ”ozo” hreflang = ”x” eweputara Google nke oma maka webusaiti mba uwa - multiregional na multilingual. Ọ na-enyere Google aka igosipụta ụdị ziri ezi nke saịtị mpaghara gị nye ndị nyocha. Na n'elu dịruru ná njọ, M ga-emejuputa hreflang mkpado dị ka:
Tinye nke a na isi nke ọ bụla n'ime mpaghara mpaghara ma buru n'uche nke ahụ Nwabueze mkpado bụ kpọmkwem peeji nke. Ugbu a ọ bụrụ na mmadụ na-achọ ọrụ m na Google UK, ọ ga-egosi ụdị asụsụ m ziri ezi nke weebụsaịtị m bụ mysite.co.uk.
Tags: obe-ngalabaobe-ngalaba canonicalsNwabuezemba ofesiimekọ ihe ụwa
Nikhil Raj nwere ahụmahụ 7 + na SEO na Digital Marketing. Ọ na-arụ ọrụ ozugbo Douglas Karr iji jikwaa ọtụtụ ndị ahịa mpaghara na mba yana iji njikarịcha njin obodo ha, mba ha na mba ofesi.
Mgbasa Ozi Obodo na Ọnọdụ
Omume Kasị Mma nke Azụmaahịa
Dee 14, 2012 na 12: 52 AM
Kwụrụ 100%. Agara m ụlọ ọrụ mba ofesi na nsogbu a. Ezigbo nwute!
Dee 14, 2012 na 5: 10 AM
Daalụ Ryan ..
Dee 14, 2012 na 6: 13 AM
Ezigbo! Daalụ maka ịkekọrịta… ọ dị mkpa ka anyị banye na nke a n'oge adịghị anya na weebụsaịtị anyị websites
Dee 17, 2012 na 2: 29 AM
Tozọ na-aga nikki !! rel = ”alternate” hreflang = ”x” bụụrụ m ozi ọhụrụ ...
Dee 19, 2012 na 5: 20 AM
Kedu ihe kpatara na “Google anaghị ewere ntụgharị asụsụ asụsụ mba ọzọ ka ha bụrụ ọdịnaya abụọ” anyị kwesịrị itinye hreflang tag dị ka
Dee 19, 2012 na 6: 14 AM
Ọ bụrụ na ị nwere nsụgharị asụsụ mba ọzọ nke saịtị na sub sub ma ọ bụ na gTLD dị iche mgbe ahụ ọ dịghị mkpa iji mkpado a ebe ọ bụ na ịnweghị ọdịnaya abụọ. Mkpado a kachasị baa uru ma inwere ọdịnaya yiri ya n'otu asụsụ nwere ọdịiche mpaghara dịka ọmụmaatụ ị nwere ọdịnaya asụsụ bekee ezubere maka ndị na-agụ akwụkwọ na USA na UK yana kwa mgbe nsụgharị asụsụ mba ọzọ dị na folda nchekwa. Can nwere ike iji akara a gwa Google na maka ndị na-achọ na Google UK ọkacha mmasị gị maka igosipụta na nsonaazụ ọchụchọ bụ UK nke saịtị gị.
Dee 19, 2012 na 8: 34 AM
Dika m ghotara ya. Daalụ